उपमहानगर हाक्न उत्साहित डा. पौडेल |
उपमहानगर हाक्न उत्साहित डा. पौडेल
प्रकाशित मिति :2017-09-12 11:44:11
सम्भावना धेरै भएपनि बिकासले फड्को मार्न नसकेको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्रका नागरिक लामो समयदेखी निराश छन् । दुई नम्बर प्रदेशकै उत्कृष्ट उपमहानगरको रुपमा हेरेका स्थानियले सोचे जस्तो बिकासको अनुभव गर्न सकेका छैनन् ।
पथलैया–वीरगन्ज औद्योगिक करिडोरमा पर्ने उपमहानगभित्र देशकै दोस्रो अन्र्तराष्ट्रिय बिमानस्थल र बिशेष आर्थिक क्षेत्र(सेज) निर्माणको प्रक्रियामा छ । तराई मधेस द्रुतमार्ग नजिकै रहेको उपमहानगरभित्रै पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज पनि पर्दछ । चार तारे स्तरको होटल सञ्चालनले पनि यस उपमहानगरलाई अझ बढी सम्भावना बोकेको नगरको सूचिमा राखेको छ ।
एक लाख १५ हजार जनसंख्या र ५७ हजार मतदाता रहेको यस उपमहानगरका नागरिक लामो समयदेखी बिकासको प्रतिक्षामा छन् । देशमा भएका थुप्रै आन्दोलनको अगुवाई गर्ने स्थानमध्येको एक जीतपुरसिमरा उपमहानगरका नागरिक स्थानिय तहको निर्वाचनपछि भने बिकासको ढोका खुल्ने र नगर समृद्धितर्फ अघि बढ्नेमा आशाबादी छन् । निराश नगरबासीको चाहनालाई पुरा गर्न यतिबेला विभिन्न राजनितिक दलका उम्मेदवार आफनो एजेण्डा लिएर नागरिकको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् ।
जनताको बिश्वास बटुल्न र जनचाहना अनुसार काम गर्ने प्रतिबद्धतासहित मतदाताको घरघरमा पुग्नेमध्येका एक उम्मेदवार हुन् ४५ बर्षिय डा. कृष्ण पौडेल । सामाजिक र सहकारी अभियन्ताका रुपमा लामो समयदेखी सक्रिय रहेका डा. पौडेललाई नेकपा एमालेले उपमहानगरको मेयरको रुपमा अघि सारेको छ । सामाजिक गतिविधिमा सक्रिय पौडेल उपमहानगरका जनताबिच निकै परिचित अनुहार हुन् । विभिन्न सामाजिक संघसंस्थामा नेतृत्व गर्दै सफलता हात पारेका पौडेललाई एमालेले अघि सारेपछि नगरबासी यतिबेला खुशि देखिन्छन् ।
पार्टीले उम्मेदवार बनाएपछि पौडेल घरदैलोमा ब्यस्त छन् । मतदाताको घरघरमा पुग्दै पौडेलले अबका दिनमा निराश हुन नपर्ने र जनताको चाहना अनुसार नै काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाईरहेका छन् । सहकारीमा बिद्यावारिधि गरेका पौडेलले उपमहानगरभित्रको वर्तमान अवस्था र अबको दिनमा काम गर्ने योजनाको खाका तयार गरिसकेको बताउछन् । समृद्ध महानगर बनाउने परिकल्पनासहित उमहानगरको नेतृत्व गर्न अघि सरेको भन्दै पौडेलले अबको दिनमा जनताले निराश हुने अवस्था आउन नदिने बताउछन् ।
‘जनताले चाहने भनेको बिकास, समृद्ध र स्वस्थ समाज हो । समृद्ध र स्वस्थ समाज भनेको जनताको रोजगारी, बिकासका सबै पूर्वाधार हुन्’ पौडेलले भने ‘यि असम्भव कुरा होईनन्, समृद्ध उपमहानगर बनाउने योजनासहित जनताको घरदैलो पुगेको छु । पक्कै पनि पुरा गर्नेछु ।’
समृद्ध महानगरको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्यसहित निर्वाचनमा होमिएका पौडेलले काम गर्ने आफ्नो योजना समेत मतदातालाई जानकारी गराईरहेका छन् । तीन महिनाभित्र रणनीतिक लक्ष, मार्गचित्र, पञ्चवर्षीय आवधिक योजना, अल्पकालीन कार्ययोजना र आवधिक मूल्यांकनको आधारमा काम गर्ने पौडेलको लक्ष्य छ । उपमहानगरको सम्भावना र समस्याका बारेमा जानकार पौडेलले देशकै उत्कृष्ट उपमहानगर बनाउने सपना बुनेका छन् । ‘उत्कृष्ट उपमहानगर बनाउने र महानगरको आधार खडा गर्ने मेरो लक्ष्य हो’ पौडेलले भने ‘जनताको चाहना पनि मेरो जस्तै नै हो, त्यसैले यतिबेला सक्षम नेतृत्वको आवश्यकता छ, जनताले साथ दिनुहुनेछ । ’
सिमरामा रहेको हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष समेत रहेका पौडेलले देशकै उत्कृष्ट सहकारीको रुपमा हातेमालोलाई उम्भ्याईसकेका छन् । संघसंस्थाको नेतृत्वका बारेमा जानकार पौडेललाई स्थानियले पनि सफल नेतृत्व गर्ने ब्यक्तिका रुपमा हेर्ने गरेका छन् । विधि र प्रणाली भन्दा बाहिर गएर काम नगर्ने नेतृत्वका रुपमा समेत हेरिन्छन् उनि । संघसंस्थाको नेतृत्व गर्ने क्रममा विभिन्न देश घुमेका पौडेलसंग अन्र्तराष्ट्रिय अनुभव पनि छ । समृद्ध मुलुकले अपनाएको रणनितिसंग जानकार पौडेलले उपमहागर प्रमुख भएपछि आफ्नो अनुभवलाई ब्यवहारमा उतार्ने तयारी गरेका छन् ।
‘थुप्रै देश घुम्ने क्रममा मैले त्यहाको बिकासको सुरुवाती अवस्थाका बारेमा गहन अध्ययन समेत गरेको छु । ति काम हामीले गर्न नसक्ने होईन्’ पौडेलले भने ‘मैले मेरो अनुभवलाई आफ्नो उपमहानगर समृद्ध बनाउनका लागि प्रयोग गर्ने हो । पक्कै पनि सफल हुनेमा आशाबादी पनि छु ।’ आवश्यक निति निर्माण गर्ने र त्यसलाई सहि रुपमा कार्यान्यवन गर्न सक्यो भने पनि धेरै सफलता मिल्ने उनको भनाई छ ।
उपमहागरको पूर्वाधार निर्माणसंगै जेष्ठ नागरिक, युवा, महिला लक्षित कार्यक्रम, मधेशी थारु बुहारी कार्यक्रम, दलित, आदिवासीजनजाति र सीमान्तीकृत समुदायका लागि प्रभावकारी योजना ल्याउने उनको सोच छ । कृषिको बढी सम्भावना रहेको उपमहानगरमा बजार व्यवस्थापन, वित्तिय सशक्तीकरणसहित घरेलु उद्यम व्यवसायको प्रवद्र्धन र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने उनको लक्ष्य छ । सहकारीमार्फत समुदायको वित्तिय तथा गैरवित्तिय समाधान दिने र जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्याउने उनले सोच बनाएका छन् ।
उपमहानगरकै ठुलो समस्याको रुपमा रहेको अब्यवस्थित बसोबासलाई ब्यवस्थित गर्ने कामलाई प्राथमिकतामा राखेका पौडेलले खेतीयोग्य जमिनको संरक्षण गर्नका निम्ति प्लटिङ न्युनीकरण र कानूनको दायरामा ल्याउने बनाएका छन् । ब्यवस्थित चक्रपथसहित उपमहानगरभित्र सबै स्थानमा सडकको सुविधा, गांउमा सामुदायिक भवन, क्लव, खेलमैदान, वाचनालय, व्यायामघर निर्माण गर्ने उनको सोच छ ।
औद्योगिक क्षेत्रतर्फ वीरगञ्ज–पथलैया औद्योगिक करिडरको प्रवद्र्धनमार्फत उद्योगको पर्याप्त विकास र सम्वद्र्धन गर्न सक्रिय रहने प्रतिबद्धता उनले मतदातामाझ ब्यक्त गरिरहेका छन् । स्वास्थ्य, शिक्षा, खेलकुद, पर्यटन, वन तथा वातावरण संरक्षण, बसपार्क, पार्क बनाउनुका साथै उपमहानगरभित्र, बाहिर र विदेशमा रहेका सबै नागरिकलाई प्रविधिको माध्यमबाट जोडेर उपमहानगरको बारेमा जानकारी गराउने योजना उनको छ ।
साविकको गाविस पिपरासिमरा, भवानीपुरजितपुर, डुमरवाना, फत्तेपुर, छातापिप्रा, अमलेखगंज, इनर्वासिरा, रामनगर र रामपुरटोकनी समेटेर बनेको उपमहागर मध्यतराईको महत्वपूर्ण गन्तब्यका रुपमा आफूले हेरेको पौडेलले बताए । यस उपमहानगर बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक, बहुभौगोलिक विविधतायुक्त स्थान, उच्च सामुदायिक चेतनास्तर रहेको भन्दै पौडेलले समृद्ध उपमहानगर बनाउने आफ्नो योजनामा सबैको साथ पाउने बताउछन् ।
डा. कृष्ण पौडेलको एक परिचय
जीतपुरसिमरा उपमहानगरको मेयरका रुपमा यतिबेला मतदातासामु आफ्नो योजना सुनाईरहेका डा. कृष्ण पौडेलको जन्म २०२९ सालमा भएको हो । रामप्रसाद पौडेल र विष्णुदेवी पौडेलको पहिलो सन्तानका रुपमा पौडेल मकवानपुरको न्युरेनी चिसापानीमा जन्मिएका हुन् । पांच दाजुभाई र दुई दिदीबहिनीमध्ये जेठा पौडेलको अहिले स्थायी बसोबास जीतपुरसिमरा उपमहानगर १५ मा रहेको छ ।
नेकपा एमालेको राजनितिमा लामो समयदेखि सक्रिय उनि २०५८ सालदेखी जिल्ला सचिवालय सदस्य छन् । करिब १५ बर्ष पार्टीको जिल्ला प्रचार बिभाग सम्हालेका उनी प्ररायुसंघ, अनेस्ववियु हुदै पार्टीको राजनितिमा सक्रिय भएका थिए । विभिन्न आन्दोलनको अगुवाई गर्ने उनि ६२÷६३ आन्दोलनमा २४ दिनसम्म पक्राउ परेका थिए । सहकारी बिषयमा विद्यावारिधी, ब्यवस्थापनमा स्नातकोत्तर र कानूनमा स्नातक गरेका पौडेलले जापान, सिंगापुर, बैंकक दक्षिण कोरिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, मलेशिया, भारत जस्ता देशको भ्रमण गरेर अनुभव बटुलेका छन् ।
एक छोरा र एक छोरीका पिता डा. पौडेल डुमरवाना बहुमुखी क्याम्पसका सञ्चालक अध्यक्ष, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघका सञ्चालक, नेपाल अडिटर्स एशोसिएसनका प्रथम केन्द्रीय उपाध्यक्ष, हातेमालो बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाका अध्यक्ष हुन् ।